Indlela Yokukwazi Konke I-Cetilistat (Cetislim) Ubunzima be-Weight Loss
/Blog/cetilistat/Indlela Yokukwazi Konke I-Cetilistat (Cetislim) Ubunzima be-Weight Loss
ezaposwa ngomhla 04 / 17 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo cetilistat.
Yonke into malunga ne-Cetilistat powder
1.Yintoni i-Cetilistat powder
I-2.Cetilistat powder i-powder eyisiqulatho esisiseko
3. Ngaba i-Cetilistat powder esebenzayo
4.Cetilistat powder Usetyenziso
I-5.Iyiphi Isisombululo kunye neeNqununu zePettilat powder?
6.Ziziphi iziphumo zecala leCelitilist powder?
7. Yintoni i-soltilility ye-Cetilistat powder kwi-solvents efanelekileyo?
8. I-Cetilistat powder ngokwenene ingakwazi ukunciphisa umzimba?
I-9. I-Cetilistat powder isinceda njani ngokulahleka kwesisindo?
10.Usebenzisa njani i-Cetilistat powder ukuphatha ukukhuluphala?
11. Ziziphi izithintelo ezizodwa ezimele zilandelwe ngenkathi ithatha i-Cetilistat powder?
12.Ufanele uxelele ugqirha wakho ngaphambi kokuba uthathe i-Cetilistat powder?
13.Cetilistat powder Izicwangciso kunye nezilumkiso
I-14.Iyiphi indlela yokudibanisa i-Cetilistat powder kwi-casules yomlomo 60mg?
15.Kuphi umehluko kwi-Orlistat ne-Cetilistat powder?
16.Siyintoni iSicwangciso soPhuhliso lweSigaba III seCelitilist powder?
17.Imibuzo ebuzwayo malunga ne-Cetilistat powder
I-Cetilistat (i-Oblean) ividiyo ye powder
I.Cetilistat (i-Oblean) isiseko se powder Abalinganiswa:
igama: Cetilistat (Oblean) powder
I-molecular Formula: C25H39NO3
Isisindo somzimba: 316.31
umbala: Grey Powder
1. Yintoni i-Cetilistat powder?
Cetilistat powder yinto ecocekileyo ye-Cetilistat powder, eyaziwa ngokuba yi-Cetislim, isoloko isetyenziselwa ukunciphisa umzimba, ukuphatha ukukhuluphala. yipuphu emhlophe kunye ne-CAS No. 282526-98-1.
2. I-Cetilistat powder ezisiseko Iinkcukacha:
igama: Cetilistat powder, cetislim
Isisindo somzimba: 401.58
Melt Point: 72.0 ku-76.0 ° C
Isitoreji sokugcina: 2-8 ℃
Cetilistat powder powder umbala: I-White okanye i-powder emhlophe
3. Ngaba i-Cetilistat powder isebenzayo?
Ukusebenza kliniki kunye nokukhuselwa kwe-Cetilistat powder kuboniswe kwinqanaba lezilingo zeSigaba II. A Isigaba IIb solingo kwezonyango 612 ngokwezonyango izigulane sidudla seswekile yabonisa ukuba kwisithuba unyango 12-veki, Cetilistat umgubo 80mg kunye 120mg wakhuthaza ebalulekileyo Ukwehla kobunzima xa kuthelekiswa ne-placebo (3.85kg kunye 4.32kg kuthelekiswa 2.86kg ngokulandelelana), ngaloo ndlela ukuhlangabezana sokugcina eziziiprayimari kwetyala ngayo.
Akenzi kwinkqubo yesistim ephakathi;
Inceda ukunciphisa ubunzima nokuphucula umzimba;
Ayibangeli ukuguquka kwemizwelo njengokukhathazeka kunye nokwesaba;
Ukusetyenziswa kwayo kukhutshwa ngu-ANVISA.
4. Sebenzisa i-Cetilistat powder
powder Cetilistat (Cetislim) yindlela iyeza anti-obesitiy onceda ukukhuthaza ilahleko emzimbeni ziyibuyisela umva le enzyme ebizwa lipase pancreatic. Le enzyme ibizwa secreted yi injeke kwaye iqhele izenzo ngaphakathi emathunjini apho kuyanceda amanqatha kwesimilo triglycerides. Ngokuthintela umsebenzi kule enzyme, lo haydrolisis of triglycerides (iintlobo amafutha embi) engagqibekanga kuyathintelwa. Oku kukhokelela ekuncipheni kakhulu sesixa fatty simahla kunye namafutha kokuba bangene umzimba, ingakumbi emva kokuba ukutya okunamafutha ziye ziphele.
Naliphi na inkunkuma engapheliyo enokuthi ingabonakali kwaye ingasuswa emzimbeni njengamafutha. Unyango lunokunceda ukunciphisa i-visceral ne-bodyweight, nangona izigulane zifanele ziqaphele ukuba ukusetyenziswa kwamachiza ekunyanyeni ukunyanya kufuneka kuhambisane nokutya, ukuzivocavoca kunye nezinye iinguqu zokuphila. Oku kuya kunceda ukunciphisa umngcipheko wokuhlaselwa kwezifo ezingapheliyo ezinxulumene nokugqithisa kakhulu, ezifana nohlobo lwe-2 yeswekile.
5. Ziyiphi i-Dosage and Cycles For Cetilistat powder?
I-Cetilistat powder dosage inikezwa njenge-60mg iifomsi zamandla zolawulo ngomlomo. Iyeza lithathwa ngokutya ukuqinisekisa ukuba likwazi ukusebenza ngelixa ukutya kukugaya, ukwenzela ukuba ukuxutywa kwamanqatha ekudleni kunokunciphisa ngempumelelo. Ugqirha wakho uya kukucebisa malunga nokuba ungakanani umuthi onokuthatha kunye nomthamo ngamnye, kwakunye nemilinganiselo efunekayo yemihla ngemihla. Kubalulekile ukuba uhambelane nale miyalelo. Musa ukuthatha okungaphezulu kunokuba ugqirha wakho akuxelele ukuba uthathe.
6. Ziziphi iziphumo zecala leCelitilistat powder?
Izigulana ezithatha unyango lokunyanyisa nge-Cetislim (i-Cetilistat powder) i powder ingaba nemiphumo emibi. Kumele uxelele ugqirha wakho ukuba oko kwenzeka. Ezinye izibonelo zinikwe apha:
Nangona ukuphendula okunomdla ngokuqhelekileyo kuthathwa njengento eqhelekileyo, iziganeko ezimbi kakhulu zingenzeka. Buza udokotela wakho ngokukhawuleza ukuba oko kwenzeka.
I-soltilility ye-Cetilistat powder kwi-solvents efanelekileyo ye-acetone, i-isopropanol, i-acetonitrile kunye namanzi zachongwa ngokusetyenziswa kwindlela yokutshatyalaliswa kwemilinganiselo yeqondo lokushisa ukusuka kwi-278.15 ukuya kwi-323.15) K phantsi kwengcinezelo ye-101.1 kPa. Kwiqondo lokushisa elimisiweyo, i-mole fraction ye-Cetilistat powder eluhlaza yayininzi kwi-acetone kunezinye ezintathu ezifanelekileyo. Babala njenge-acetone> isopropanol> acetonitrile> amanzi. I-solubilities efunyenweyo yayihambelana ne-Apelblat equation. Ixabiso elona likhulu lokuphambuka okuqhelekileyo ngu-0.86 × 10- 2, kunye nokuphambukiswa kwendawo, i-15.55 × 10- 4. Ukongezelela, iiparitha ze-solitus ezikhethiweyo (δx1,3) ze-Cetilistat powder kwi-mixte ye-acetone (1) + yamanzi (2), i-isopropanol (1) + amanzi (2) kunye ne-acetonitrile (1) + amanzi (2) iipropati zabo ze-thermodynamic ngeendlela eziphambili ze-Kirkwood-Buff. Ixabiso le-δx1,3 lingafani ngokungafaniyo kunye ne-solven solvent (1) inxalenye kuwo wonke umxube onomsoco. Ikhemitha yekhethelo ekhethiweyo yayingalunganga kwimimandla ecebileyo yamanzi kodwa inokubakho kwimixube ephakathi kunye ne-sol-rich mixtures. Kwimeko yokugqibela, kwakungenakuqondakala ukuba i-Cetilistat powder yayisebenza njenge-Lewis acid kunye nama-molecules. Isenzo sokusombulula isisombululo singadibana nokuqhekeka kwesakhiwo esicwangcisiweyo samanzi malunga neeplastiki ze-Cetilistat powder eluhlaza okwandisa ukusombulula kwesi siza. Idatha ye-solubility kunye nophando lwe-thermodynamic kwandise ulwazi lwe-physicochemical malunga ne-Cetilistat powder kwimimandla engqameneyo yamabhanari, eyayimfuneko kwiimveliso zamachiza kunye neekhemikhali ukugcina ixesha nemali ekuphuculweni kwenkqubo yokwenza isisombululo kunye / okanye i-crystallization process designs.
Uphando oluthile lubanga ukuba i-Cetilistat powder tablet isebenza ukuvimbela ukuxutywa kwamanqatha. Isiphumo saso sihlalutyiweyo ngokubaluleka kwintlawulo yeoli ekhoyo kwimfesane yabantu abaye baphathwa unyango kunye neziyobisi.
Kwiphononongo epapashwe kwiBritish Journal of Clinical Pharmacology, amavolontiya athatha unyango nge-Cetilistat powder eluhlaza babonisa ukwanda kweenqatha ezincinci kumanqeni abo ngokuthelekiswa neqela kwaye abazange bathabathe izilwanyana. Uphononongo olufanayo lugqiba ukuba unyango lwe-Cetilistat powder lusebenza kakuhle ukukhusela ukuxutywa kwamathambo emathunjini kwizifundo ezinempilo ezifumana ukutya okulawulwayo.
Uvavanyo lwezonyango oluqhutywa yi-laboratory yaseJapan iTatteda, umenzi weCelitilistat powder eluhlaza lubonise ukuba abantu ababenyango ngonyango kwiiveki ze-12 balahlekelwa ubunzima ngaphezu kweqela elilawulayo elifumana i-placebo kuphela.
Ukufunda izigulane ze-612 ezigqithisileyo, iqela elifumana i-Cetilistat powder kwi dose ye-120 mg kg 4: I-32 ilahlekile ngokuqhelekileyo, ngelixa iqela elithe lafumana i-80 mg Letilistat powder eluhlaza yashiya i-3.85 kg. Iqela elawulayo, elifumana i-placebo kuphela elahlekelwa yi-2.86 kg kwiiveki ze-12.
Okokuthi, kwakukho ukulahleka kwesisindo okungenani kwe-25% ngaphezulu kumaqela usebenzisa i-powder Cetilistat kunokuba iqela ligcinwe ukutya okufanayo kodwa alizange lithathe iyeza.
9. I-Cetilistat powder isinceda njani ngokulahleka kwesisindo?
I-Cetilistat powder yi ukulahleka kwesisindo esetyenziselwa ukudibanisa ne-calorie ephantsi yokutya. Isebenza ngokuthintela inani elikhulu lamanqatha ukusuka ekutyiweyo kunye nokufakwa emzimbeni. Oku kulahleka kwe-weight powder kukwahlula njenge-lipase inhibitor kwaye isebenza ngokuthe ngqo kwindlela yokugaya ukutya apho ikhupha inyathelo le-enzyme ye-lipolytic ebizwa nge-lipase. Ezi lipases yinto umzimba osetyenziswayo ukugaya amanqatha. Nangona kunjalo, xa eli liyeza lilawulwa kunye nomtya, libophezela kwi-lipases, ngaloo ndlela libavimbela ukuba bangaphuli amanqatha. Amafutha angenayo i-hydrolyzed esikhundleni salolu hlobo, adala ukunyuka kwamafutha e-fecal nokunciphisa amafutha. Xa zisetyenziselwa kunye nokunciphisa i-calorie yokutya, kunokunceda ukuphucula ukulahleka kwesisindo kunye nokwenza kube lula ukuba izigulane ezigqithiseleyo zibuye zibuyiselwe, ngoko kukuphucula amathuba okulahleka kwesisindo. Indlela yokusebenzisa iyafana powderat edala ngokuvimbela i-pancreatic lipase.
10. Indlela yokusebenzisa i-Cetilistat powder ukuphatha ukukhuluphala?
Ukukhula kokukhula kokukhuluphala kunyuse ukukhangela iziyobisi ukunyanga le meko. Izicwangciso ezahlukeneyo zonyango ziye zaphandwa, kuquka:
I-Serotonin kunye ne-noradrenaline reuptake inhibitors (i-anorectic agents)
I-Endocannabinoid receptor antagonists
I-Cetilistat powder yi-lipase inhibitor, eneendlela ezifanayo zokwenza u-Roche anti-obesity medication orlistat (Xenical®) efumana imvume yokulawula kwi-1997. Ezi ziyobisi zisebenza kwiphepha lesisu ukuze zivimbele i-lipase, i-enzyme echaphazelekayo ekudleni kwamafutha okutya. Ngokuvimbela ukuphazamiseka nokuxutywa kwamathambo kwi-gut, ii-lipase inhibitors zinciphisa i-fat fat and calories, ngaloo ndlela zenza ukulahleka kwesisindo.
Ungayeki ukuthatha imithi ngokukhawuleza ngaphandle kokuba ufundiswe ngugqirha. Ukuyeka imithi ngokukhawuleza kunokubangela ukuba ukugula kubuyele.
Gwema ukusetyenziswa kotywala njengoko kunokuthi utshintshe ukutywala
Gcina amayeza aphumelele kubantwana.
Uyacetyiswa ukuba ungathathi i-Cetilistat powder ukuba
sele idlulile umhla wokuphela kweyeza elishicilelwe kwipakethi.
i-foil okanye ukupakisha ichithwe okanye ibonisa iimpawu zokuphazamisa okanye kukho ukutshatyalaliswa.
12. Yintoni omele uyixelele ugqirha ngaphambi kokuba uthathe i-Cetilistat powder?
Yazisa ugqirha ukuba unayo nayiphi na imbali yempendulo yokumelana nokusetyenziswa kwayo
Tshela ugqirha wakho ukuba ukhulelwe ngelixa uthatha i-Cetilistat powder.
Yazisa ugqirha ukuba uthatha naziphi na iziyobisi, i-OTC imishanguzo, iimveliso zamanzi okanye izongezelelo zondlo
13. I-Cetilistat powder Izicwangciso kunye nezilumkiso
Akukhuthazwa ukuthatha iiplumula ze-3 kwiiyure ze-24.
Ngokukhawuleza uqhube kwisebe elixakekileyo elisondeleyo ukuba unobangela obuthathaka. Iimpawu eziqhelekileyo ezinxulumene nokuphendula okunjalo kubandakanya ubunzima bokuphefumla okanye ukugwinya, ukuqina kwesifuba, ukuvuvukala, ukukhupha isikhumba, kunye nemihlathi.
Cetislim akusoloko ilungele zonke izigulane. Njalo qhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokusebenzisa le myeza ukuba ukhulelwe, uncelisa, uzama ukukhulelwa, usebenzisa nayiphi na imachiza (imithi okanye imithi engekho myalelo), usebenzisa nayiphi na imveliso yemveliso okanye i-supplementary, okanye ukuba unayo i-allergies okanye enye impilo iingxaki.
Imilinganiselo echanekileyo ye-Cetilistat powder kunye nemithi yesigxina ixhomekeke kwisigulane kunye nemeko ephathwayo. Musa ukulungelelanisa umlinganiselo wakho ngaphandle kokuvunywa ngumboneleli wakho wezempilo. Lo mveliso usebenza kuphela njengoko uhleliwe kwaye uyalelwe.
14. Indlela yokudibanisa i-Cetilistat powder kwiifomsules zomlomo 60mg?
I-Cetilistat powder Receipes Formula:
02 # izixhobo zokuzalisa i-capsule 100mg / capsule I-Cetilistat powder 150g
I-Cetilistat powder dose: 60mg / dose
100mg / capsule-Cetilistat powder eluhlaza 60mg / dose = 40mg / dose isitashi
I-Cetilistat powder 60mg / umthamo: 40mg / dose isitashi sommbila = 3: 2
150g Cetilistat powder oluhlaza: 150mg isitashi yegesi powder = 3: 2
250,000mg ÷ 100mg / capsule = 2500capsules (i-Cetilistat powder)
15. Nguwuphi uhluko phakathi kwe-Orlistat ne-Cetilistat powder?
I-Cetilistat powder, inoveli yesisu esiswini se-lipase inhibitor, ibonakala isebenza ngokufanelekileyo ekulawuleni ukukhuluphala kunye nokuxhatshazwa kwayo njengenye i-lipase inhibitor, ilistlistat, ngelixa kubonisa ukunyamezela, ngokubhekiselele kwizigaba ezimbini ze-2 ngezifundo, ezizimbini-eziyimfama, ezilawulwa yi-placebo, izifundo ze-12-veki.
Uthi: "I-Lipase inhibition ibonakalise ukuphumelela kwizigulane ezigqithisileyo kunye nezigulane ezigqithiseleyo zesifo sikashukela," watsho uTom, umfundisi, i-faculty yempilo, iYunivesithi yase-East Anglia, eNorwich, eUnited Kingdom, oye wazisa izifundo ezimbini egameni leCetilistat eluhlaza eYurophu. Iqela apha kwi-15th Yurophu yaseYurophu yokuTyekela (ECO).
Uphando lokuqala luphandle ukusebenzisa i-Cetilistat powder kwizigulane ze-372 ezinobunzima bomzimba (BMI)> 30, kumaziko kulo lonke elaseYurophu. Zonke izigulane zafumana iingcebiso ezinzulu kwi-dietetic kulo lonke uphando kwaye zidla ukutya okunqunyiwe okubalwe ukuba malunga nama-kcals angama-500 ngaphantsi kwesisindo-ukugcina ukutya. Ukongeza, izigulane zanikwa i-60, i-120, okanye i-240 mg ye-Cetilistat powder eluhlaza, okanye indawo ye-placebo, ngexesha lokudla, amaxesha amathathu ngosuku.
Ukulahlekelwa kwexabiso eliphambili kwenzelwe kuwo onke amaqela enyango kwiiveki ze-12, kunye nokunciphisa kwe-3.5-kg kwindleko efunyenwe kunye ne-120 mg Cetilistat powder kathathu ngokumalunga ne-placebo (P <.05).
"I-Cetilistat powder yayiphumelele ekunciphiseni ukulahleka kwesisindo kwii-12 iiveki zokufunda," kusho uDkt. Tom kwingxelo ye-Ephreli 23rd. "Ukongezelela, kukho ukunciphisa okubonakalayo kwinquma."
Kwiseshoni yesibini evezwe nguDkt. Tom, abaphandi babhalisa izifundo ze-612 obesesifo soshukela se-2, ababethabatha i-metformin. Uninzi lwezigulane nazo zineemimiselo, kwaye malunga neyesithathu nazo zithatha amayeza anetyholongwane.
Njengokuba kufundwe kwangaphambili, izigulane zithole ukutya okunyanisekileyo kunye nenye yeentlobo ezahlukeneyo ze-Cetilistat powder eluhlaza (40, 80, okanye 120 mg), okanye indawo ye-placebo. Ukongezelela, iqela lokufunda lesine lalingenangqiqo kwi-120 mg yee-XLUMX ngezihlandlo zemihla ngemihla.
UDkt. Tom uthe ukunciphisa umzimba kuncinci kuwo onke amaqela enyango, malunga ne-35% yezifundo kwi-dose ephezulu ye-Cetilistat i-powder dose ekufezeni ukulahlekelwa kwesisindo malunga ne-5% yobunzima bomzimba bokuqala okanye ngaphezulu. Ukongezelela, kukho ukunciphisa amanqaku athile kwi-hemoglobin ye-glycosilated (HbA1c) kwiiveki ze-12.
Nangona idatha echanekileyo yayingalinganiswa phakathi kweCetilistat eluhlaza kunye ne-orlistat, kwavela iintlukwano ezinkulu phakathi kwezi zimbini iziyobisi malunga neenkcukacha zabo zokunyamezela, ngokutsho kukaDkt. Tom.
Ngokubanzi, izigulane eziphathwe nge-orlistat zaphantse ziphindwe kabini kweziganeko ezimbi kakhulu - ikakhulukazi isisu - esikhokelela ekunqanyeni unyango kunokuba Iqela le-Cetilistat powder. Isantya seziganeko ezimbi ezikhokelela ekunqanyeni ukuthengiswa kwakufaniswa phakathi kweqela le-placebo kunye nabamkeli be-Cetilistat powder.
Ngenxa yeziphumo, uDkt. Tom wagqiba ukuba i-Cetilistat powder eluhlaza iprofayile enokunyamezela, kwaye ikhuselekile kwaye iphumelele ekulawuleni ukukhuluphala nokuxhatshazwa kwayo.
Inkxaso yezi zifundo zinikezelwa I-AASraw Powder Biochemical, umenzi we-Cetilistat powder.
16. Yintoni iSicwangciso soPhuhliso lweSigaba III seSigaba III I-Cetilistat powder ukulahlekelwa kwesisindo?
I-Cambridge, i-UK-Matshi i-6, i-2008-Alice (i-LSE: i-AZM) namhlanje ivakalisa ukuba i-FDA ivumelene neeprotokholi ezimbini ze-Phase III yophuhliso lwe-Cetilistat powder phantsi kwe-Special Provision Assessment ("SPA") inkqubo kwaye icebisa ukuba u-Alice avulwe isifo sikashukela esihlukile IND.
I-Cetilistat powder eluhlaza ngumkhiqizo we-Alice ophantsi kokuphuhliswa kokunyameka kunye nokudibanisa, kuquka uhlobo lwe-2 yesifo sikashukela. Ingumzimba we-intastinal lipase inhibitor ovimba i-fatity digestion kunye nokuxhamla, okukhokelela ekunciphiseni amandla okunciphisa amandla, ngoko ke ukulahlekelwa ngumzimba.
Ukulandela ukuphela kokuphumelela kweengxoxo zeSigaba II, i-FDA igunyazisile icebo lesicaciso sika-Alice kwisiGqeba soPhuhliso lwezonyango se-Phase III se-Cetilistat powder. Oku kuquka izifundo ezintathu zeenyanga ze-12 ezibandakanya:
(i) izigulane ezigqithisileyo ezingenakudibanisa kunye nezigulane ezigqithisileyo kunye nokuphathwa kakubi (ngaphandle kohlobo lwe-2 sikashukela);
(ii) izigulane ezigqithiseleyo ezingenayo i-co-morbidity kunye nezigulane ezigqithiseleyo ezinokungahambisani nokuziphatha okungekho (ngaphandle kohlobo lwe-2 sikashukela); kwaye
(iii) izigulane ezinezifo eziphathekayo zonyango lwe-2 kwaye ngubani othe waphatha okanye akazange aphendule ezinye izidumbu.
Ngo-Ephreli 2007, uAlice wachaza ukuba umgaqo-nkqubo wesifundo sokuqala wawuvunyelwene ne-FDA phantsi kwenkqubo ye-SPA. Iiprogram zeesibini neyesithathu ziye zavunyelwana kunye ne-FDA phantsi kwenkqubo ye-SPA. Isifundo sesibini siya kubandakanya ukuthelekiswa ngqo kunye neXenical ®, kunye ne-placebo.
I-FDA ikhishwe isikhokelo sokuqulunqwa kwesifo sikashukela ekupheleni kukaFebruwari 2008. Ngaphantsi kwesi sikhokelo, uye wavuma ukuba ukuphuculwa kwe-HbA1c kuye kwaba ngumgangatho oqhelekileyo wokuphumelela kwiziphumo zesifundo sikashukela.
Ubungqina bokhuseleko kunye nokusebenza kwe-Cetilistat powder oluhlaza luye lwasungulwa ngovavanyo olubanzi lweSigaba se-I kunye neSigaba II. Ngaphezu koko, kwizifundo zeSigaba II, i-Cetilistat powder eluhlaza iboniswe ukuba ibangele ukulahleka kwesisindo samanani, xa kuthelekiswa ne-placebo kwaye, kwizigulane zesifo sikashukela esinezifo eziphezulu, ukudala ukunciphisa amanqaku e-HbA1c.
I-FDA ihambelana ngokuthe ngqo no-Alice ngokumalunga nesicwangciso sayo sesicwangciso seSigaba III kwaye icebisa ukuba u-Alice avule isifo sikashukela se-IND esibizwa ngokuba yi-Cetilistat powder, kuba ngoku ayifuni ukuba isiphumo seziyobisi kwi-glycemic control zimele zizimeleyo kwisiphumo somzimba ukuze ukuba isicatshulwa sinokuthathwa njengesigxina se-diabetes. Nangona i-FDA ichaze esidlangalaleni ukuba uphando lwexesha elide oluhlala ixesha elide ngaphezu konyaka omnye lunokufuneka kwezinye iindlela zokwelapha apho kuphakanyiswe imiba ekhuselekileyo yimibuzo okanye iphakame, kuye kwabonisa ukuba uphando lwenyanga lwe-12 luya kukwanela ukufundisisa okubalulekileyo kunye neCelitilistat eluhlaza powder kubafundi abanesifo sikashukela.
Inkqubo yokuphuhliswa kweSigaba III yeCelitilistat powder, enika indlela ecacileyo yokubhalisa njengomveliso wokunyamezela, ngoku sele ilungele ukuqala emva kokugqitywa kwemicimbi yorhwebo. Kuqhubeka ukubandakanya inxaxheba ebalulekileyo kunye nentuthuko eCetilistat powder eluhlaza; iingxoxo ziyaqhubeka.
Ukuphawula ngesibhengezo, iGosa eliLawulayo eliPhezulu, uTim McCarthy wathi:
"Ndiyakuvuyela ezi ndaba. Akukuphela nje indlela yokulawula i-Cetilistat powder njengomkhiqizo wokunyamezela ngokuqinisekileyo oqiniswe kunye ne-FDA, ukucacisa ukuba amaqabane angabachaphazelekayo ngendlela yokuthengisa kwiCetilistat powder eluhlaza, kodwa ithuba lokuphuhlisa i-market yeCetilistat powder ngokuqhubekayo ngokuvula i-IND isifo sikashukela sinokubaluleka okukhulu kwezoshishino. "
Uvavanyo lweeProgram olukhethekileyo (SPA)
Ngokubambisana nokugunyazwa kwakhona komThetho wokuThengiswa kweMithi yokuSebenzisa umThetho we-1992 (PDUFA) ngoNovemba 1997, i-FDA yavumelana nemigqaliselo yokusebenza ekhethekileyo yokuhlolwa kweprotocol ekhethekileyo kunye nesivumelwano. Ezi njongo zinikezela ukuba, ngokucela, i-FDA iya kuhlola iiprotokholi ezithile (oko kukuthi iiprocogogicity protocols, protocoles zokuzinza, kunye neenkqubo zeSigaba III zezilingo zeklinikhi eziza kubangela isiseko esona siseko sebango elisebenzayo) ukuvavanya ukuba ngaba banelisekile ukuhlangabezana nesayensi kunye nolawulo iimfuno ezichongwe ngumxhasi (kule ngxaki uAlice).
Emva kokuba i-FDA kunye nomxhasi oxhasayo, phantsi kweNkqubo yoVavanyo oluPhezulu, i-Arhente iqinisekisa ukuba uyilo kunye nohlalutyo olucwangcisiweyo lwesifundo lujolise ngokwaneleyo kwiinjongo zokuxhasa ukuhanjiswa kolawulo.
Njengoko kuchazwe kwiinjongo ze-PDUFA ze-Special Provision Assessment, ngokuvisisana nokuyila, ukusetyenziswa, kunye nokuhlalutya okucetywayo kwiprotocols ephononongwa phantsi kwenkqubo, i-Arhente ayiyi kuguqula umba wayo kwimiba yokuyila, yokusebenza okanye yokuhlalutya ngaphandle kokuba impilo yoluntu iinkxalabo ezingabonakaliyo ngexesha lokuhlolwa kweprotocol phantsi kweli nkqubo kubonakala.
Cetilistat powder eluhlaza
Imveliso ye-Alice yemveliso, i-Cetilistat powder, iphuhliswa ukunyanga kokunyamezeka kunye nokuxhatshazwa kwemithi (kuquka uhlobo lwe-2 sikashukela). Ingumzimba we-intastinal lipase inhibitor ovimba i-fatity digestion kunye nokuxhamla, okukhokelela ekunciphiseni amandla okunciphisa amandla, ngoko ke ukulahlekelwa ngumzimba. Kuhluke kwezinye iindawo ezininzi zokulwa nokunyamezela kunokuba zithintela ingqondo ekunciphiseni ukutya, kodwa zisebenza ngokuthe tye. I-compound ihlala kwiphepha lesisu esisisigxina esingenakuncedo emzimbeni. Ngako ke, kungalindeleka ukuba ube neprofayili engcono yokufumana ingozi kwiiyobisi eziphambili. Ngako oko, i-Cetilistat powder eluhlaza ayixhomekeke kwiinkxalabo zokhuseleko ngokubanzi ezihambelana neziyobisi eziphambili.
I-Xenical yaseRoche yiyona mveliso evunyiweyo yokunyamezela kwaye iphinda isebenzise i-lipase inhibitor. Nangona kunjalo, kwiimvavanyo zeclini, i-Cetilistat powder iboniswe ukuba ixhomekeke kangcono kune-Xenical eneempembelelo ezichaphazelayo ukuthobela isigulane.
17. Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga I-Cetilistat powder impahla eluhlaza
A. Ngaba ikhuselekile ukuguqula umthamo we-Cetilistat powder?
Hayi, akucebisi ukuba utshintshe umthamo ochaziweyo. Buza udokotela wakho ngemibuzo enxulumene nenani.
B. Ngaba kuqhelekile ukuba ufumane ukunyaniseka kunye neCelitilistat powder eluhlaza?
Ewe, ukuguguza i-Cetilistat i-effects effects. Nangona kunjalo, qhagamshelana nodokotela wakho.
C. Ngaba ndinokuyincoma le mayeza kwabanye?
Akukho cetyiswa ukunyusa izidakamizwa kwabanye njengokuba ubunzima beemeko kunye nembali yezobugcisa ayifani nayo yonke into.
tags: ukuthenga i-Cetilistat powder, Cetilistat powder, Abahlinzeki be-Cetilistat powder
I-anti-Obesity powder: Cetilistat powder vs Orlistat powder
I-powder Obesity powder VS Cetilistat powder
Ndingayithenga phi i-high quality finasteride powder	I-powder enchancing powder: Vardenafil HCL powder VS Avanafil powder
I-Gestodene powder (60282-87-3)